Unholy Death Knight - Torolàlana PVE - Patch 8.0.1 | Death Knight, Game Guide | WoW Guides | WoW Guides
Unholy Death Knight - Torolàlana PVE - Patch 8.0.1
Adriel Diaz | | Fantsom-pahafatesana, Game Guide
Hey tsara! Manao ahoana ianao, mpiara-miasa? Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mitondra anao izay talenta tsara indrindra ho an'ny Knight tsy mety maty mandritra ny haavo sy amin'ny ambaratonga avo indrindra mba hamoahana ny mety ananan'ity specialise ity.
1 Knight Knight tsy masina
4 niveau 56
5 niveau 57
6 niveau 58
11 Torohevitra mahasoa
17 Toetra Azerite
Knight Knight tsy masina
Mety hanana fahavoazana lehibe amin'ny fihaonana kendrena tokana.
Manana fahasimbana sisa tavela izy io, ary koa ny DPS hamafana ny onjan'ny fahavalo haingana be.
Izy io dia manana fahaiza-manao tena ilaina hanalefahana ny fahasimbana voaray.
Izy io dia manana fitaovana lehibe amin'ny fanafihana.
Knight Knight tsy masina amin'ny ady ho an'i Azeroth
-Talenta manga: azonao atao ny misafidy azy ireo raha tsy tianao ireo miseho mavo, tsy hisy fahasamihafana firy amin'ny DPS.
-Ny kofehy maitso: ireo talenta ireo no tsara indrindra manimba zavatra betsaka kokoa amin'ny faritra, izany hoe fihaonana amin'ny tanjona telo mahery.
Haavo 56: Hatao daholo ny rehetra
Haavo 57: Fanaviana Ebony
Haavo 58: Safidim-potoana
Haavo 60: Mpanam-panahy
Haavo 75: Safidim-potoana
Haavo 90: Pestilence
Haavo 100: Frenzy tsy masina
Kavina voany: Ny fanafihan'ny Claw an'ny ghoul anao dia manana vintana 30% hamelezana ny Festering Wound amin'ny tanjona.
Ho vita daholo: Ny ody Raise Dead-nao dia miantso minion-taolana fanampiny.
Aloka mandratra fo: Fifanarahana (40% -n'ny herin'ny fanafihana) p. Simba ny aloka ary miteraka vaky 1 mpiady.
Kavina voany tsy safidy tsara ho an'ny fihaonana kendrena tokana satria mety hiatrika fahasimbana bebe kokoa amin'ny fahaizana manaraka isika. Na izany aza, dia tena ilaina amin'ny fihaonana amin'ny tanjona maro.
Ho vita daholo ity talenta ity no toerana misy anao ho an'ity sampana talenta voalohany ity satria misy fahasimbana bebe kokoa.
Aloka mandratra fo tsy talenta ratsy raha maniry fahasimbana fanampiny amin'ny kendrena isika.
Fery be loatra: Festering Wounds dia nampitombo ny fahasimbana 25% rehefa nipoaka, ary ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra miala ny Festering Wound dia mahazo (herin'ny fanafihana 20%). Simba ny aloka.
Fanaviana Ebony: Virulent Plague dia manimba fahasimbana 15% bebe kokoa amin'ny fotoana sy antsasaky ny fotoana.
Lozam-pifamoivoizana tsy masina: Manodidina anao miaraka amin'ny andiana bibikely mahatsiravina izay manindrona ny fahavalo rehetra manodidina ny 6 seg, mitondra azy ireo amin'ny aretina tsy masina izay mifehy (98% hery fanafihana) p. fahasimbana mihoatra ny 14 seg.
Fery be loatra Io no safidy tsara indrindra raha mitady fahasimbana amin'ny faritra isika amin'ny fihaonana amin'ny tanjona maro. Ity talenta ity dia mety mahasoa kokoa ao amin'ny trano-maizina.
Fanaviana Ebony Io no safidy tsara indrindra ho an'ity sampan'ny talenta ity satria mora zatra amin'ny toe-javatra maro izy.
Lozam-pifamoivoizana tsy masina tsy ilaina intsony ny milaza fa tsy dia ilaina io fahaizana io. Azo ampiasaina amin'ny tranomaizina.
Fahatongavana mahafaty: Mampitombo ny haben'ny Lethal Pull amin'ny 10 metatra. Ny famonoana fahavalo izay manome traikefa na fanomezam-boninahitra dia mamerina mamerina ny cooldown of Deadly atraksyon.
Asphyxiate: Manangana ny lasibatry ny fahavalo amin'ny tany, manorotoro ny tendany amin'ny hery maizina, ary mampihetsi-po azy ireo mandritra ny 4 seg.
Claw ny maty talenta tsara izany raha tiantsika ny hisoroka ny fahavalontsika tsy handositra na hisongona antsika.
Fahatongavana mahafaty Ity talenta ity dia tsy ilaina afa-tsy amin'ny fanatsarana ny traikefa an'izao tontolo izao.
Asphyxiate Io no safidy atolotra any amin'ny kianja filalaovana satria fanaraha-maso kendrena mahery vaika io. Rehefa dinihina tokoa, dia natao ho setra fanampiny.
Pustules azo hanina: Ny fipoahana fery iray dia manana 10% vintana hanome anao ny kolikoly Runic.
Harbinger of Doom: Ny tampoka Doom dia miteraka 15% matetika kokoa ary afaka miakatra hatramin'ny fiampangana 2.
Mpijinja fanahy: Fanapahana ny fanahin'ny fahavalo, fifampiraharahana [(hery fanafihana 80%)] p. Simba ny aloka mihoatra ny 8 seg. Raha maty ny fahavalo noho ny vokatry ny Soul Reaper ary manome traikefa na voninahitra dia mahazo tombony 10% ianao mandritra ny 8 seg. Spawn 2 rune.
Pustules azo hanina Safidy tsara any amin'ny tranomaizina izy io raha misy tanjona marobe akaikin'ny caster voakasiky ny fipoahana.
Harbinger of Doom Ny talenta no atolotro azy satria afaka ampiarahina amin'ny fahaizana hafa hampitomboana ny mety ho fanafihana ataontsika.
Mpijinja fanahy Talenta tsara hamonoana ireo fahavalontsika izay manana isan-jato isan-jato amin'ny fahasalamana, ankoatry ny fanomezana tombony fanampiny antsika rehefa mamono ny fahavalo. Matetika ilaina amin'ny mpampiasa trano-maizina. Na izany aza, manana ny fampiasana azy io koa izy amin'ny fanafihana.
Spellblade: Ny Shell Anti-Magic dia mitelina fahasimbana majika 30% bebe kokoa ary maharitra 5 segondra lava.
Fifanarahana maty: Mamorona pact de mort izay manasitrana anao amin'ny 50% amin'ny fahasalamanao faran'izay betsaka, fa kosa mandray ny fanasitranana nahazo sanda mitovy amin'ny 30% amin'ny fahasalamanao farany indrindra mandritra ny 15 seg.
Spellblade Talenta mahasoa izaitsizy tokoa izany raha manao ozona ny fahavalontsika. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny fotoana ihaonan'ilay fihaonana izay ahafahantsika mampihena ity fahasimban'ny majika ity.
Fifanarahana maty talenta tsara izany raha te hampitombo ny fahafahantsika ho tafavoaka velona amin'ny ady.
areti-mandringana: Ny fahasimbana amin'ny fahafatesana sy ny fahasimbana dia manana vahana 10% hamelezana ny fahavoazana amin'ny fahavalo.
manaja ny masina: Fandotoana ny tany kendrena, fifampiraharahana [((herin'ny fanafihana 5%) * (11) / 1)] p. Ny fahasimban'ny aloka amin'ny fahavalo rehetra mandritra ny 10 seg. Raha mbola mijanona ao amin'ny faritra simba ianao, dia hamely ny fahavalo rehetra eo akaikin'ny kendrenao ny ody Scourge Strike. Raha misy fahavalo ao amin'ilay faritra simbain'ny Desecrate dia miparitaka isan-tsegondra.
areti-mifindra: Mahatonga ny tsirairay amin'ireo Loza Virulent-nao handrehitra, hiatrika (hery manafika 20%) ho simba. Fanimbana aloky ny fahavalo voan'ny aretina sy (herin'ny fanafihana 8%). bonus Ny fahasimban'ny aloka amin'ireo fahavalo hafa rehetra akaiky azy.
areti-mandringana Safidy tsara amin'ny ady izy io izay misy tanjona marobe manodidina na, mivantana, amin'ny fihaonan'ny sefo ho toy ny fahasimbana fanampiny.
manaja ny masina amin'ity tranga ity, tokony ho ao anatin'ny faritra misy antsika isika mba hampitombo ny fahavoazana ataontsika amin'ny fahavalo betsaka araka izay tratra. Matetika izy io dia ilaina kokoa ao amin'ny tranomaizina.
areti-mifindra Ity talenta ity no azoko atoro ho an'ny tranomaizina noho ny fahasimbana fanampiny.
Tafiky ny voaozona: Ghouls nantsoin'ny Tafiky ny Maty nametraka vokatra fanampiny tamin'ny fanafihan-dry Claw. Fahafatesana: mampitombo ny fahasimbana nalaina tamin'ny Death Knight. Ady: mampihena ny fanasitranana vita. Mosary: ​​mampihena ny simba naterak'i Death Knight. Pestilence: fahasimbana rehefa mandeha ny fotoana.
Fahasosorana tsy masina: Manentana anao ho ao anaty hazakazaka mamono olona mandritra ny 12 seg, mampitombo haingana ny 20% ary mahatonga ny fanafihan'ny fiara anao hamindra ilay lasibatra amin'ny Festering Wound.
Antsoy Gargoyle: Antsoy gargoyle ao amin'ilay faritra manapoaka ny lasibatra mandritra ny 30 seg. Gargoyle dia nahazo tombony 1% nitombo isaky ny 2. hery runic no laninao.
Tafiky ny voaozona io dia mety ho lasa safidy tsara raha tsy mamono ny tsy maty ny fahavalontsika amin'ny fanaovana faritra. Mbola toy izany ihany koa ny soso-kevitra raha toa ka tsy afaka manatratra ny fahavalontsika isika na tsy tokony hiala aminy isika mba hanao mekanika manokana. Na izany aza, azo ampiasaina ho toy ny fahasimbana vaky.
Fahasosorana tsy masina Io no safidy tsara indrindra amin'ity sampan'ny talenta ity amin'ny fanaovana bemidina noho ny mety fahavoazana omeny antsika.
Antsoy Gargoyle mety ho safidy tsara ao anaty tranomaizina izany.
Rehefa manomboka ny lalao amin'ny fipoahanay dia hanomboka izahay Tafiky ny maty.
Fanovana maizina Ampahan'ny fipoahana io. Hampiasa azy io aorian'ny tafika.
Ny fihodinana ifotony an'ity fanamasinana ity dia toy izao: Areti-mifindra (tazomy hatrany amin'ny tanjon'ny fivoriana)> Fanovana maizina (ampiasao amin'ny cd)> Antsoy Gargoyle (mampiasa cd)> apocalipsis (ampiasao amin'ny cd na rehefa misy marika 6 na maromaro an'ny Ratra mihena ambonin'ilay solomaso)> Spiral of death, (Tokony hampiasaina ho mpampianatra lehibe indrindra handaniantsika ny Hery runic. Raha misy marika 4 na maromaro an'ny Ratra mihena amin'ny tanjona, ampiasao Spiral of death manandrana manampy Loza misy an'izao tontolo izao mihoatra ny tanjona. Raha mitranga izany dia ampiasao Fitokonana/Aloka mandratra fo mandra-paha tsy misy marika intsony ny Ratra mihena)> Fipoahana purulent (Raha tsy misy Ratra mihena mihoatra ny tanjona).
fampiasana Spiral of death raha tsy misy marika ny Ratra mihena amin'ny tanjona na raha tsy manana rune hampiasaina ianao Fipoahana purulent.
Miankina amin'ny talenta amin'ny fahasimban'ny faritra nofidintsika, azontsika atao ny mampiditra azy ireo tsy misy olana amin'ny fihodinan'ny toetra amam-panahy.
Filaharana maizina no mpamorona fandrahonana fototry ny Death Knight. Tena ilaina amin'ny arena mba… hampitahorana ny… fahavalontsika? Eny, avia! Fa nahoana no tsy?
1 kendrena --- Hery> Hainganana > Fitokonana fanakianana> Fahaizana miovaova (>) na (=) fifehezana
Tanjona marobe --— Fifehezana> HERY > Fahamailoana = Famelezana fitsikerana = Fahavoazana
Peratra Enchant - Pact of Haste
Fitaovam-piadiana enchant - fitetezana haingana
Kraken maso mahery
Battle Potion ny tanjaka
Trondro sy hena honahona
Fetin'ny be kapiteny
Battle Ramag Augment Rune
Avelanay eto aminao ny fitaovana tsara indrindra ho an'ity mpilalao ity avy amin'ny tarika Uldir voalohany.
fitaovam-piadiana Khor, hazakazaky ny kolikoly Taloc
Casco Gálea Touring Frames MADRE
Fehin-tsoroka Paosin-damosin-frost Fiarahabana
sosona Akanjo miharohoro amin'ny horohoro fetid Fetid Devourer
anoloana Breplplate ny famoronana apokaliptika Zul
Bracers Vambraces manohitra ny famotehana Devourer tsy misy endrika
fonon-tanana Mpitantana santionany matevina Mariky ny ady Rakkali
fehin-kibo Fehikibo lehiben'ny decontaminator MADRE
pataloha Greaves an'ny fiambenana tsy misy farany Taloc
kiraro Warboots amin'ny famongorana tanteraka Zek'voz
Tady 1 Peratra fanaraha-maso lo MADRE
Tady 2 Fandringanana azo antoka Mythrax the Unraveler
Trinket 1 Tranolay miolakolaka an'i Xalzaix Mythrax the Unraveler
Trinket 2 Syringe aretin-dra Vectis
Gálea Touring Frames : Titans Archive / Fivadihan-tena / Fiarovana amin'ny laoniny
Paosin-damosin-frost : Fahafatesana purulent / Henoy ny antsoko / Afina amin'ny vatosoa
Breplplate ny famoronana apokaliptika : Matrix laser / Fifamatorana eto an-tany / Diaben'ny voaozona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Unholy Death Knight - Torolàlana PVE - Patch 8.0.1
Nahazo fanendrena 9 i Blizzard amin'ny loka ho an'ny Gamer Choice 2018
Herinandro manomboka amin'ny 28 Novambra ka hatramin'ny 5 Desambra - Vaovao